Microsoft Teams inowana kubatwa kweFluent Dhizaini
October 31, 2020 by Justin26
Kunze kwekuwedzera runyorwa rukuru rwezvinhu, Microsoft iri kushanda zvakare mukuvandudza kutaridzika uye kunzwa kweiyo Microsoft Teams app ye Windows 10.
Iyo kambani yakagadzirisa iyo UI yewebhu vhezheni yeapp neine nyowani Dhizaini cues kune vanoedza, ine yekupedzisira vhezheni inotarisirwa kuburitswa muna Zvita. Zvese zvichienda mushe mutengi wemuno anozove newakagadziridzwa mu2021.
Iko (zvimwe kwakavanzika) kuvandudzwa kunonyanya kukosheswa uchienzaniswa neshanduro yekare (pazasi).
Enzanisa neizvozvo, iyo nyowani vhezheni (pazasi) ine yakavanzika mimvuri mhedzisiro, yakakomberedza makona, mashoma akazara mavara uye anodonha mumvuri mhedzisiro pane iwo mavara.
Microsoft inotendwa zvakare kuti iri kushanda pane imwe Rima Rima, asi haisati yagovana screenshots parizvino.
Kunze kweiyo yakagadziriswa UI, iyo yaNovember yekuvandudza inotarisirwawo kuunza yakagadziriswa mameseji, zviyeuchidzo maficha, uye mitsva sarudzo dzemisangano.
Middle Earth: Mumvuri wehondo tirera, zuva rekuburitsa, nhau uye maficha
Nzira Yokuti Uwedzere 3D Migumisiro Kumifananidzo Uchishandisa Photos App In Windows 10